रवि लामिछानेको आगमनले राजनीतिमा हलचल, यी हुन सक्छन चुनौति – Sajha Post
रवि लामिछानेको आगमनले राजनीतिमा हलचल, यी हुन सक्छन चुनौति
साझापोष्ट टिप्पणी ७ असार २०७९ १८:३०
काठमाडौं । रवि लामिछानेले नयाँ पार्टी घोषणा गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा तरंग आएको छ । विशेष गरी ठूला दलभित्र यसले हलचल मच्चिएको छ । नयाँ पार्टी कस्तो बन्छ र त्यसले जनतामा कस्तो प्रभाव पार्छ ? भन्ने हेर्न अझै केही महिना कुर्नै पर्छ । तर यसले ठूला दलहरुबाट दिक्क भएका नागरिकमा भने एक खालको उत्साह देखिएको छ । पार्टी घोषणा कार्यक्रममा उपस्थित भएको ठूलो जनसमूह र सामाजिक संजालमा आइरहेका टिप्पणीले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ । युवा पुस्तामा रविको आकर्षण बढि देखिएको छ ।
उनको पार्टीमा रहने अन्य नेताबारे अझै स्पष्ट हुन बाँकी छ । तर रविले सुरुमै नयाँ ढंगले पार्टी अघि बढाउने संकेत भने गरेका छन् । उम्मेदवार छनोटका लागि ‘आन्तरिक रुपमा निर्वाचन गर्ने, परिवारवादबाट टाढा रहने, व्यवसायीसँग चन्दा नलिने, चुनाव अघि नै संभावित मन्त्रीको नाम सार्वजनिक गर्ने, थिंक ट्याङकबाट योजना बनाउने’ जस्ता घोषणाले रविको पार्टी केही फरक हुन्छ कि भन्ने देखिएकाे छ । तर रविलाई पार्टी बनाउन सहज भने छैन । दल बन्नेवित्तिकै अनेक स्वार्थका व्यक्तिको प्रवेश हुने र कालान्तरमा तिनै व्यक्तिबीच शक्ति संघर्ष चल्ने गरेका उदाहरण थुप्रै छन् ।
नेपालको राजनीतिमा पनि एक अर्काको खुट्टा तान्ने प्रवृति विद्यमान छ । पार्टी केही ठूलो हुनासाथ नेतृत्वमा पुग्न हुने तँछाड मछाडका कारण कैयौं दल फुट्ने गरेका छन् । रविको नयाँ दलमा पनि यी सबै प्रवृत्ति आउन सक्छन् । त्यसको व्यवस्थापन रविले कसरी गर्छन ? भन्नेले पनि नयाँ पार्टीको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । अबका केही दिन नयाँ पार्टीमा सदस्य बन्नेको संख्या उल्लेख्य हुनेमा शंका छैन् । तर जति धेरै सदस्य बन्दै जानेछन् त्यति नै विकृति पनि भित्रन सक्छ। कमिटीमा हुने तानातान र व्यक्तिगत स्वार्थ पनि बढ्दै जान सक्छ । यसको घानमा रवि र उनकाे पार्टी पनि पर्न सक्छन । जुन कुरा रविले पक्कै बुझेका होलान ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एक समय निकै ठूलो दल बनेको माओवादी केन्द्रको अहिलेको अवस्था र वैकल्पिक रुपमा आशाको किरण संचार गरेको विवेकशील साझा नै यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । रविको नयाँ पार्टीबारे अहिले नै अनुमान गर्न सकिदैन । उनलाई साथ दिइरहेको समूह पनि अहिलेसम्म प्रष्ट रुपमा बाहिर आएको छैन । तर अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा नयाँ दल रविको छवि वरिपरि नै घुम्ने निश्चित जस्तो देखिन्छ । अझ यो पार्टी रवि केन्द्रीत पनि हुन सक्छ । त्यसैले मुख्य नेतृत्वका लागि तत्कालै होडबाजी हुने संभावना देखिदैन । जुन उनका लागि सहज अवस्था हो । रविका सामू तत्कालै आउने चुनौति भने अब पार्टीमा आउने नयाँ सदस्यको व्यवस्थापन नै हो । अनेक पार्टी छाडेर आउनेहरुलाई उनले कसरी व्यवस्थापन गर्छन् त्यसमा पनि नयाँ पार्टीको गति निर्धारण हुनेछ । अर्कातिर स्वतन्त्र बनेरै जितेका काठमाडौंका मेयर बालेन शाहदेखि अहिले भकाभक स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरिरहेका प्रभावशाली व्यक्तिसँग रविको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ ? याे पनि हेर्न बाँकी छ ।
विवेकशील साझा पार्टीबाट असन्तुष्ट एउटा ठूलो समूह पनि नयाँ गन्तव्यको खोजीमा छ । त्यसबाहेक विभिन्न समयमा विषय केन्द्रीत संघर्ष चलाएका केही व्यक्ति पनि युवा पुस्तामा लोकप्रिय छन् । यी सबैलाई रविले मिलाएर अघि बढ्न सके भने नयाँ उत्साहको संचार हुन सक्छ । रविका दाजु हरिशरणले अहिले त्यस्ता व्यक्तिलाई मिलाएर आफै उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन् । जुन रविका लागि पारिवारिक रुपमै आएको चुनौति मान्न सकिन्छ । यद्यपी हरिशरण राजनीतिबाट पछि हट्ने संभावना भने छ । कतिपय संचार माध्यममा उनले ‘रविका लागि म पछाडि हट्न सक्छु’ भनेर बोल्नुले पनि त्यो बुझ्न सकिन्छ ।
तर जे सुकै भए पनि अहिलेको राजनीतिबाट वाक्क दिक्क भएको एउटा ठूलो समूहलाई रविको राजनीतिमा प्रवेश र नयाँ दलको गठनले थोरै भए पनि आशाको संचार गरेको छ । ठूला दल भन्दै ‘जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित पुरानो नेतृत्वमा डर पैदा भएको छ । केही नेताले सामाजिक संजालमा लेखेका स्टाटसले पनि त्यसको शंका गर्छ । अहिले नागरिकलाई गतिलो काम गर्ने नेता चाहिएको हो । चाहे त्यो रवि वा अरु जो सुकै पनि हुन सक्छ । अब गफ गरेर जनतालाई ढाँट्ने समय सकिएको छ । रविले पनि त्यस्तै गरे भने नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी मात्रै हुनेछ । तर अहिलेका लागि भने रविको कदमलाई सही बाटोमा अघि बढ्न सुझाव दिनु नै उपयुक्त हुनेछ ।
चित्रबहादुरको प्रश्न: गणतन्त्र सिध्याउने कम्युनिष्ट एकता किन चाहियो ?
अर्थमन्त्री शर्माको एमालेलाई जवाफ : बजेटका विषयमा उठेका प्रश्नलाई लिएर राजीनामा दिन्नँ
तलब नदिएको आरोप लागेपछि झाँक्रीले भनिन् : काम नगरेपछि कसरी तलब दिने ?
अलग पार्टी घोषणा गर्दै वामदेव गौतम